June 6, 2020 - Khitalin Media
FB သုံးတာ ဒီလိုပို့ဈမြိုးတှကွေောငျ့ ဘလျေ ကုနျရကြိုး နပျနတောပါ …
June 6, 2020 Khitalin Media 0
ဦးဖိုးအေးတို့ မိသားစု သင်ျခြိုငျးထဲ မှာ ပေါကျတဲ့ မြှဈကို ခြိုးယူပွီး စားလိုကျမိကွသောအခါ…
*သင်္ချိုင်း ဆိုသည်မှာ* လူတစ်ယောက်က မေးတယ်… “ကိုဖိုးအေး ခင်ဗျား သင်္ချိုင်းထဲက မျှစ်တွေ ယူစားနေတာ မရွှံဘူးလား…? ဖြေ။ ။”ဘာရွှံမလဲကွ လူသေကောင်က ထွက်တဲ့မျှစ်မှ မဟုတ်တာ မြေကြီးထဲက ထွက်တဲ့မျှစ်ပဲ ဘာရွှံစရာရှိလဲ။ သင်္ချိုင်းဆိုတာလဲ မြေကြီးပါပဲကွာ လူတွေသမုတ်ထားလို့သာ သင်္ချိုင်းဖြစ်နေတာပါ ငါဆို ဒီသင်္ချိုင်းက ထွက်တဲ့မျှစ်တွေ […]
စတုတ္ထတန်းကျောင်းသား ငြိမ်းမောင်ရဲ့ ရည်းစားစာဖတ်ရင်း ကျောတွေပါ ချမ်းသွားခဲ့တဲ့ ဆရာမလေး
ဆရာမ သားကို ဖိုးထောင်ဖင်ချတယ် ဟေ ငြိမ်းမောင် တိုင်လိုက်သည့်စကားကြောင့် ဆရာမ ငေါက်ခနဲ မတ်တပ် ထရပ်လိုက်သည်။ သူတိုင်လိုက်သည်ကိုတော့ အတန်းထဲမှ မည်သူမှ မကြားလိုက် ဖိုးထောင် လာစမ်း ဆရာမ ခေါ်လိုက်တော့ တစ်တန်းလုံး အသံတိတ်ပြီး ဖိုးထောင်အား စိတ်ဝင်တစားကြည့်ကြသည်။ ဖိုးထောင် ကား ကုတ်ချောင်းချောင်းနှင့် […]
အိမ်တောင်လူမိုက်_ဘူးမစိုက်နဲ့ ဆိုတဲ့ စကားပုံ၏ အဓိပ္ပါယ်
အိမ်တောင်လူမိုက် ဘူးမစိုက်နဲ့ ဆိုတဲ့ စကားပုံ၏ အဓိပ္ပါယ် သည်စကားပုံလေး ငယ်စဉ်ကပင် ကြားဖူးခဲ့ပါ၏။ သို့သော် ဆိုလိုရင်းကို ဝေဝါးစွာပင် …. အိမ်ထောင်ကျပြီး ဘူးစိုက်ရင် လူမိုက်လား…? လူလိမ္မာ မှ စိုက်ရမည်လား …? စသဖြင့်.. အမှတ်မထင် ဆရာကြီး(စစ်ကိုင်းဦးဖိုးသင်း)၏ ဆောင်းပါးကို ဖတ်မိ၍ ဆိုလိုရင်း […]
မျက်ရည် လွယ်ရင် မဖတ်ကြပါနဲ့၊ ဖတ်ပြီးရင်လည်း မငိုကြပါနဲ့ …
သူနဲ့ ကျွန်မ စတင်သိခဲ့တာက………………(facebook) မှာ သူနဲ့ ကျွန်မက သူငယ်ချင်းတွေပေါ့ …။ကျွန်မ သူ့ကို သတိထားမိတာက သူက အသည်းကွဲ ကဗျာတွေ စာတွေ ရေးလေ့ရှိတဲ့ သူမို့ပါ …။သူကလူထူးဆန်းလေး တစ်ယောက်ပေါ့ အချစ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကြောက်လန့် နာကျင်နေတဲ့ မယုံကြည်တဲ့ လူတစ်ယောက်လို သူ့အချစ်ကြောင်းတွေကို […]
မတျောတဆ လညျခြောငျးမှာ ငါးအရိုးစူးလြှငျ ဒါတှလေုပျလိုကျပါ
ငါး အရိုး မျက်လျှင် အတော့်ကို ခံစားရ ခက်သည်မှာ အားလုံးလည်း သိပြီး ဖြစ်မှာပါ။ တစ်ခါတရံ ခဏလေးနဲ့ ပျောက်သွားပေမယ့် အခန့်မသင့် လျှင် ဆေးရုံတက်ပြီး လည်ချောင်းကနေ ခွဲထုတ် ရတဲ့ အထိ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ငါးအရိုးမျက်လျှင် အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်မယ့် အိမ်တွင်း […]
ကောင်းလွန်းလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပါ ဖတ်ပြီးရင် ပြန်လည် မျှဝေပေးပါ
တနေ့မှာ လယ်သမားတယောက်ရဲ့ မြည်းဟာ ရေတွင်းပျက်ထဲ ပြုတ်ကျပါရော ။ မြည်းက စနားစဖွယ် ငိုကြွေးနေခဲ့ပြီး၊ လယ်သမားကလည်း ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ အကြံထုတ်နေခဲ့တယ် ။ မြည်းဟာ အိုနေပြီ ရေတွင်းဟောင်းကလည်း ဟောင်းနေလို့ မြေဖို့ပြစ်ဖို့လိုနေပြီ ၊ ဒါကြောင့်မြည်းကို ကယ်တင်ဖို့ မထိုက်တန်တော့ဘူးလို့ လယ်သမားက ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ။ […]
လမ်းပေါ်မှာ သပိတ်တစ်လုံးနှင့် ဆွမ်းချိုင့်တစ်လုံး ချထားတာတွေ့လို့ ကိုယ်တော်တစ်ပါးကို ကြည့်လိုက်သောအခါ . . .
စစ်ကိုင်းတိုင်း တစ်နေရာ လမ်းပေါ်မှာ သပိတ်တစ်လုံးနှင့် ဆွမ်းချိုင့်တစ်လုံးချထားတာတွေ့တယ်။ ဘယ်သူမှလည်း မစေခိုင်း၊ ဘာအဖိုးအခမှလည်း မရဘဲ ရဟန်းတစ်ပါးက သူဆွမ်းခံကြွချိန်မှာ မိုးရေနှင့် လမ်းတွေပြိုကျနေတာ ခရီးသွားတွေ အန္တရာယ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ဆိုပြီး ပေါက်တူးတစ်ချောင်းနှင့် လမ်းပြင်နေလေရဲ့။ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး လျှောက်သင့်တာလျှောက်၊ လုပ်သင့်တာလုပ်ပြီးတော့ “တကာကြီး၊ ဦးဇင်းမျက်နှာပုံနှင့် ဘွဲ့ကိုတော့ မတင်နှင့်နော်၊ သံဃာတော်တွေအားလုံး […]
မရှက်တမ်း ရင်ဖွင့်ထားတဲ့ ပြည်တန်ဆာမလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကြေကွဲစာ …
သီတင်းကျွတ်ပြီ…ဝါထွက်ပြီ…။ တမင်သက်သက် ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး လူစုကြတယ်..။ ဝါတွင်းသုံးလ အောင့်အီးထားကြတဲ့ အ သောက်အစားကိစ္စလေးတွေကို စတင်ဖွင့်လှစ်ကြမယ်ဆိုပြီး..၊ တကယ်တော့.. လူတွေက…..ကိုယ့် သတ်မှတ်ချက် နဲ့ကိုယ် သွားနေကြတာပါ..။အဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့..ကိုယ်နဲ့ဘယ်လောက်ထိလိုက်ဖက်မလဲဆိုတဲ့ပေတံနဲ့..။ ညနေစောင်း… ကျောက်ကုန်းမှာဆုံကြမယ်..၊ YAMMYမှာလူစုံတော့ ငါးနာရီဝန်းကျင်.. အင်းစိန်ဘက်ကလာတဲ့သူလည်း ရှိတယ်.. တောင်ဥက္ကလာဘက်ကလာသူလည်းရှိတယ်။ အားလုံးက လေးဆယ်ကျော်အိမ်ထောင်သည်တွေချည်းပဲ..။ ဘီယာလောက်နဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြမယ်ဆိုပေမယ့် ဝိုင်းအလယ်လောက်မှာ […]
facebook ပေါ်မှ လိမ်နည်းအသစ်အကြောင်းလေး
လိမ်နည်းအသစ်အကြောင်းပြောပြမလို့ သူက အွန်းလိုင်းရှော့ပင်းသမားတွေကို အဓိကပစ်မှတ်ထားတယ်ဗျာ။ ပထမဆုံး OS group ထဲဝင်ရမယ် အော်ဒါတင်ပေးရမယ်သုံးသောင်းသွင်းရမယ် နေ့တိုင်းပို့စ်တင်ပေးရမယ် အော်ဒါရရ မရရပို့စ်တစ်ခုကို နှစ်ရာရမယ် ပို့စ်ငါးခုကို တစ်ထောင်ရမယ် ။ဆိုတော့အနည်းဆုံး တစ်လသုံးသောင်းရမယ်အရင်းကြေပြီ ထပ်သွင်းစရာမလိုတော့ဘူး လတိုင်းဒီလိုပဲဆက်တိုက်ရနေမယ် အဲဒီလို လုပ်ရင်း တစ်ရက်ကိုတစ်ထောင် နှစ်ထောင် သူကပေးနေမယ် ငွေကပြန်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ […]